Guddiga Dib u soo nooleynta Dhaqaalaha Bulshada wuxuu ku maalgelinayaa $ 4.9 milyan sagaal degmo - Waaxda Ganacsiga ee Gobolka Washington
Bogga ugu weyn|Guddiga Soo nooleynta Dhaqaalaha Bulshada ayaa $ 4.9 milyan ku bixinaya sagaal degmo
Guddiga Soo nooleynta Dhaqaalaha Bulshada ayaa $ 4.9 milyan ku bixinaya sagaal degmo
Waxaa laga yaabaa 18, 2017
Laba ka mid ah mashaariicda ugu waa weyn waxaa ka mid ah maalgashiga lamaanaha gaarka loo leeyahay ee $ 120 milyan oo ay bixisay Sunnyside Community Hospital Association oo loogu talagalay dhismaha cusbitaal cusub iyo $ 10 milyan oo ay bixisay KW Partners / FedEx oo ku taal Port of Everett.
OLYMPIA, WA - Guddiga Dib-u-nooleynta Dhaqaalaha Bulshada Gobolka Washington (CERB) ayaa maanta ansixiyay $ 4,956,250 oo ah deeqo iyo amaahyo dulsaar hooseeya oo loogu talagalay horumarinta kaabayaasha bulshada iyo daraasadaha suurtagalnimada dhaqaalaha ee sagaal degmo oo gobolka oo dhan ah. Mashaariicdu waxay bartilmaameedsanayaan kobaca ganacsiga iyo shaqo abuurka degmooyinka Chelan, Clallam, Cowlitz, Grant, Lewis, Lincoln, Snohomish, Walla Walla, iyo Yakima.
Laba ka mid ah mashaariicda ugu waaweyn - Sunnyside Community Hospital iyo Riverside Business Park oo ku taal Port of Everett - waxay keeneen $ 130 milyan oo maalgashi shuraako gaar loo leeyahay. Mashruuc saddexaad oo weyn oo dhisme ah oo ka socda Dekedda Chehalis, ayaa lagu qiyaasayaa in $ 30 milyan lagu maalgelin doono halkaas.
Gobolka Chelan - $ 50,000 oo deeq ah Dekedda Chelan Degmo daraasad macquul ah oo lagu qiimeynayo laguna abuurayo tirakoobka dhulka iyo dhismayaasha ku yaalo Degmada Chelan, waxaa loo qoondeeyay noocyo kala duwan oo ah horumarinta warshadaha iyo ganacsiga. Lacagta CERB waxaa u dhigma $ 16,667 ilaha maxalliga ah.
Gobolka Clallam - $ 50,000 oo deeq ah Magaalada Sequim loogu talagalay Qorshaha Aagga Fursadda Dhaqaalaha ee Bell Creek. Tani waa "qorshe subarea" oo lagu daro falanqaynta goobta, falanqaynta suuqa, iyo jihada loogu talagalay horumarka mustaqbalka ee Bell Creek Economic Opportunity Area (EOA). Lacagta CERB waxaa u dhigma $ 17,000 ilaha maxalliga ah.
Degmada Cowlitz - $ 50,000 oo deeq ah Dekedda Woodland daraasad macquul ah iyo falanqeyn suuqa si loo go'aamiyo wax ku oolnimada dhisida kaabayaasha fiber-ka madow ee laba waddo si madaxbanaan, soo noqoshada maalgashiga kaabayaasha dhaqaalaha, iyo baahida suuqa iyadoo lagu saleynayo miyiga waddooyinka. Lacagta CERB waxaa u dhigma $ 25,000 ilaha maxalliga ah.
Gobolka Grant - $ 50,000 oo deeq ah Magaalada Saabuunta Harada Qorshaha Nidaamka Biyaha Macdanta. Tani waa daraasad suurtagal ah oo lagu qiimeynayo xarumaha raasumaalka ee nidaamka biyaha, diyaarinta qiyaasaha kharashka ee soo jeedinta la cusbooneysiiyey, horumarinta deynta iyo falanqaynta saameynta dakhliga iyo bixinta qiimeynta saameynta deegaanka iyo oggolaanshaha. Lacagta CERB waxaa u dhigma $ 16,667 ilaha maxalliga ah.
Degmada Lewis - $ 665,000 oo deyn ah iyo $ 100,000 oo deeq ah Dekedda Chehalis loogu talagalay Mashruuca Dhismaha Pinnacle. Horumarkan la filayo wuxuu ka kooban yahay u diyaargarowga goobta oo ay ku jiraan dhismaha dhulka, jidadka, yutiilitida dhulka (biyaha, bulaacada fayadhowrka, korontada, isgaarsiinta) iyo maaraynta biyaha duufaanka, taas oo ka dhalan doonta sagx hektar dhisme. Waxay dekeddu ku qiyaastay in 234 shaqo la abuuri doono isla markaana $ 30 milyan lagu maalgelin doono mashruucan. Lacagta CERB waxaa la jaan qaadaya $ 1.4 milyan oo ilaha maxalliga ah.
Degmada Lincoln - $ 50,000 oo deeq ah oo loogu talagalay gobolka daraasadda suurtagalnimada ee falanqaynta ugu sareysa uguna wanaagsan ee Goobaha Carwada ee Degmada Lincoln. Lacagta CERB waxaa u dhigma $ 16,667 ilaha maxalliga ah.
Degmada Snohomish - $ 1.85 milyan oo amaah ah Dekedda Everett loogu talagalay mashruuca hagaajinta Horumarinta Beerta Ganacsi ee Webiga. Mashruucan lammaanaha ah ee gaarka loo leeyahay ayaa ka kooban waddo isku xirta, socodka dabka oo la casriyeeyay iyo dib u soo celinta wadada iyo rakibidda korontada, biyaha, bullaacadaha iyo korontada biyaha. Wada-hawlgalayaasha KW Projects / FedEx, waxay maal-gelin doonaan $ 10 milyan, taas oo keenaysa in 50 shaqooyin la hayo iyo 49 shaqo oo cusub la abuuro. Lacagta CERB waxaa u dhigma $ 1,096,000 ilaha maxalliga ah.
Gobolka Walla Walla - $ 50,000 oo deeq ah Magaalada Kulliyadda loogu talagalay Daraasadda Qorsheynta Goobta Kulliyadda Dhexe. Tani waa daraasad suurtagal ah oo loogu talagalay sahaminta habboonaanta goobta, falanqaynta goobta, istiraatiijiyad suuq geyn iyo falanqeyn aasaasi ah oo hordhac ah si loo go'aamiyo haddii goobta 10-hektar ay ku habboon tahay isticmaalka warshadaha fudud. Lacagta CERB waxaa u dhigma $ 16,667 ilaha maxalliga ah.
Degmada Yakima - $ 2 milyan oo amaah ah Magaalada Sunnyside loogu talagalay mashruuca dhismaha Isbitaalka Bulshada ee Sunnyside. Mashruucan iskaashi ee gaarka loo leeyahay ayaa ka kooban dhismaha biyaha gudaha, ka hortagga dabka, bulaacada fayadhowrka iyo hagaajinta gaadiidka goobta cusbitaalka cusub. Iskaashatada Sunnyside Community Hospital Association waxay maalgashan doontaa $ 120 milyan, iyadoo xafidan doonta 523 shaqooyin ayna abuureyso 32 shaqooyin cusub mashruucan. Lacagta CERB waxaa la mid ah $ 1 milyan oo ilaha maxalliga ah.
Degmada Yakima - $ 41,250 oo deeq ah Dekedda Sunnyside daraasad suurtagal ah oo ay ku jiri doonaan falanqaynta kaabayaasha, qorshaha goobta fikradeed, daraasadda suurtagalnimada dhaqaalaha, daraasadda suuq geynta iyo falanqaynta mushaharka ee Miles Smith Property. Lacagta CERB waxaa u dhigma $ 13,750 ilaha maxalliga ah.
"Mashaariicdani waxay matalayaan mashaariicda kaladuwan ee CERB ay maalgaliso - mashaariicda u horseedaya koritaanka shaqo ee guud ahaan gobolka iyada oo loo marayo horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha iyo qorsheynta," ayuu yiri Guddoomiyaha CERB David Rhoden. "Guddigu wuxuu ku faraxsan yahay inuu la shaqeeyo mid kasta oo ka mid ah beelahan maadaama ay ka shaqeynayaan sidii loo abuuri lahaa shaqooyin joogto ah oo gaar loo leeyahay."
Brian Bonlender, oo ah Agaasimaha Waaxda Ganacsiga ee Washington wuxuu yidhi: "Dhaqaalaha Washington wuxuu ahaa kii ugu dhaqsiyaha badnaa ee soo kordha wadanka sanadkii la soo dhaafay, hadana waxaan ognahay in qaybo badan oo ka mid ah gobolkeena aysan si buuxda uga qaybqaadan barwaaqadaas." "Qalabka maalgelinta soo jiidashada leh ee ay bixiso CERB waxay muhiim u yihiin xoojinta bulshada reer miyiga ah iyo maalgashi wanaagsan oo mustaqbalkeenna dhaqaale la wadaago."
Laga soo bilaabo 1982, CERB waxay ku dhowaad $ 163 milyan u goysay maamullada maxalliga ah ee gobolka oo dhan, maalgashi abuuraya in ka badan 35,000 oo shaqo, iyo maal-gashiga raasumaalka gaarka loo leeyahay oo ah $ 5.6 bilyan ($ 34 ilaa $ 1) oo ku soo noqoshada maalgashiga CERB.
Maaddaama ay tahay ilaha istiraatiijiga ah ee horumarinta dhaqaalaha Washington, CERB waxay diiradda saareysaa abuurista shaqooyin waaxyo gaar loo leeyahay iyadoo lala kaashanayo dowladaha hoose iyadoo maalgelinaysa horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha. Horumarintani waxay dhiirigalineysaa horumarinta ganacsiga cusub iyo ballaarinta. Marka lagu daro maalgelinta mashaariicda dhismaha, CERB waxay siisaa maalgelin xadidan daraasadaha qiimeeya mudnaanta sare leh mashaariicda horumarinta dhaqaalaha. Ka baro wax badan oo ku saabsan CERB barta www.commerce.wa.gov/cerb.
FARXADDeeqaha bulshada iyo amaahdahorumarinta dhaqaalaha
← $ 7 milyan oo ka mid ah sanduuqa Nadaafadda Tamarta ee gobolka ayaa horumarinaya mashaariicda microgrid ee Avista, SnoPUD Waxaa La Shaaciyay Ku Guuleystayaasha Abaalmarinta Bulshooyinka Caanka Ah Ee 2017 →